Reputation informant - Reputation Informant dia misy karazana fiasa manara-maso ny lazan'ny mailakao. Iray amin'ireo lafiny malaza indrindra amin'ny 250ok ny vahaolana dia azy ireo tambajotra fandrika spam misy domains 35 tapitrisa eo ho eo. Ny fidirana amin'ity data ity dia tsy misy idiran'ny mpivarotra mailaka. Ny habe sy ny kalitaon'ny tamba-jotra spam, ary ny fidirana an-tsokosoko ao amin'ireny tahirin-kevitra tena izy ireny (oh: ny fandrika isanandro, IP, domain, tsipika lohahevitra, firenena) dia tena manintona ahy amin'ny maha mpandefa ahy. Ny fanaraha-maso ny lisitra mainty? Azo alaina amin'ny fotoana tena izy ity angona ity, ary azonao atao ny mametraka fampandrenesana namboarina mba hifantoka amin'ny lisitra izay tena mahaliana anao indrindra. Tiako ny malefaka amin'ny fanaingoana izay mahazo fampandrenesana sy ny fomba fandefasana izany fampandrenesana izany (oh: mailaka, SMS).
Inbox Informant - Ny mpivarotra dia mila fitaovana maharitra amin'ny fotoana fohy hanampiana azy ireo hiditra ao anaty boaty. Inbox Informant dia mampiseho aminao hoe ohatrinona ny mailakao no tonga ao anaty boaty, spam, ary ohatrinona no tsy hita. Azonao atao ny mamaha ny olan'ny fandefasana mailaka manokana amin'ny alàlan'ny fampielezan-kevitra, izay tena manampy tokoa. Iray amin'ireo fahasamihafana lehibe hitako teo 250ok ary Return Path dia tolotra lisitra 250ok. Alohan'ny hahitanao ny fampitahana ny fandrakofana dia ireo mpamatsy boaty mailaka alefanao mailaka ihany no masomboly manandanja. Fe-potoana. 250ok nanamboatra fitaovana fanatsarana lisitra zana-kazo hanampiana anao amin'ny laser amin'ireo mpampiantrano izay raharaha. Amin'ny ankapobeny, misy fahasamihafana kely eo amin'ny fandrakofana lisitra miaraka amin'ireo orinasa roa mitazona masomboly manokana, fa ao kosa ny parodiany amin'ny ankamaroan'ny mpampiantrano lehibe rehetra. Ireo orinasa roa ireo dia mety manana izay ilainao na hahazo azy.
Mpandefa mailaka - Ao amin'ity tontolon'ny data ity dia misokatra ny CTR ary tsy mitantara ny zava-misy rehetra izy ireo. Ny fampiasana pixel fanarahana 250ok miaraka amin'ny Email Informant dia milaza aminao hoe iza no mpamaky mamaky hafatra sy haharitra hafiriana, ary inona ny karazana fitaovana sy ny rafitra fampiasan'izy ireo. Iza amin'ireo rohy na CTA no nanao ny tsara indrindra? Manatsara ny fotoana fandefasana ve ianao? Ny mailaka informant dia manampy anao hahatakatra izay mandeha sy izay tsy mandeha mba hahafahanao mandray fanapahan-kevitra haingana sy haingana.
Design Informant - Ny mpivarotra mailaka rehetra dia mila manao tombana mialoha ny sidina manodidina ny famolavolana 250ok manana fampifangaroana ivelan'ny boaty amin'ireo mpivarotra rendering Email amin'ny Acid ary Litmus. Design Informant dia mizaha toetra ny fahaizanao manohitra ny sivana spam mahazatra toy ny Barracuda, Symantec, Spam Assassin, Outlook, ary maro hafa hahafahanao mamantatra sy manamboatra ireo fikafika alohan'ny hamoahana ny fampielezankevitrao.
Tags: AndroidAndroid 2.3Topi-maso mailaka Android 2.3Fitsapana mialoha amin'ny mailaka Android 2.3Android 4.2Topi-maso mailaka Android 4.2Fitsapana mialoha amin'ny mailaka Android 4.2Topi-maso mailaka AndroidFitsapana mialoha amin'ny mailaka AndroidAOL MailAOL mailaka ChromeAOL mailaka ny topi-maso mailaka ChromeAOL mandefa fitsapana mialoha ny mailaka ChromeTopi-maso mailaka AOL MailFitsapana ny mailaka AOL MailAOL Mail Internet ExplorerTopi-maso mailaka AOL Mail Internet ExplorerFitsapana mialoha ny mailaka AOL Mail Internet ExplorerApple Mail 6Apple Mail 6 mailaka previewFitsapana mialoha mailaka Apple Mail 6BlackBerry 4 OSHijery mailaka BlackBerry 4 OSFitsapana ny mailaka BlackBerry 4 OSBlackBerry 5 OSHijery mailaka BlackBerry 5 OSFitsapana ny mailaka BlackBerry 5 OSmpampahalala lisitra maintyJamba lokoTopi-maso ny mailaka Blindness lokoFitsapana mialoha ny mailaky ny jamba lokofanateranaDMARCfanakanana ny mailakamailaka mailakafitsapana ny famolavolana mailakampampahalala mailakaangona tontonana mailakalazan'ny mailakaGmailFampiharana GmailTopi-maso ny mailaka amin'ny App GmailFitsapana ny mailaka amin'ny mailaka App an'ny GmailGmail ChromeHijery mailaka Gmail ChromeFitsapana ny mailaka Gmail ChromeGmail FirefoxHijery mailaka Gmail FirefoxFitsapana ny mailaka Gmail FirefoxGmail Internet ExplorerHijery mailaka Gmail Internet ExplorerFitsapana ny mailaka Gmail Internet Explorergreg kraiosfanadihadiana amin'ny boatympampahalala inboxfametrahana boatyiPadTopi-maso mailaka iPadFitsapana mialoha ny mailaka iPadipad miniTopi-maso mailaka iPad MiniFitsapana ny mailaka iPad MiniiPad RetinaiPad Retina mailaka previewFitsapana ny mailaka iPad RetinaiPhone 4siPhone 4s mailaka previewFitsapana mialoha mailaka iPhone 4siPhone 5Topi-maso mailaka iPhone 5Fitsapana mialoha amin'ny mailaka iPhone 5iPhone 5siPhone 5s mailaka previewFitsapana mialoha mailaka iPhone 5siPhone 6Topi-maso mailaka iPhone 6Fitsapana mialoha amin'ny mailaka iPhone 6iPhone 6 PlusiPhone 6 Plus mailaka mialohaFitsapana mialoha mailaka iPhone 6 Plusfamindrana ispfanandramana mailaka isplitmusLotus Notes 6.5Fanamarihana mailaka Lotus Notes 6.5Fitsapana ny mailaka Lotus Notes 6.5Lotus Notes 7Fanamarihana mailaka Lotus Notes 7Fitsapana ny mailaka Lotus Notes 7Lotus Notes 8Fanamarihana mailaka Lotus Notes 8Fitsapana ny mailaka Lotus Notes 8Lotus Notes 8.5Fanamarihana mailaka Lotus Notes 8.5Fitsapana ny mailaka Lotus Notes 8.5MAC OS XTopi-maso mailaka MAC OS XFitsapana ny mailaka MAC OS XWINDOWS MICROSOFTMICROSOFT WINDOWS topi-maso amin'ny mailakaFitsapana ny mailaka MICROSOFT WINDOWSOutlook 2000Topi-maso mailaka an'ny Outlook 2000Fitsapana ny mailaka Outlook 2000Outlook 2002Topi-maso mailaka an'ny Outlook 2002Fitsapana ny mailaka Outlook 2002Outlook 2003Topi-maso mailaka an'ny Outlook 2003Fitsapana ny mailaka Outlook 2003Outlook 2007Topi-maso mailaka an'ny Outlook 2007Fitsapana ny mailaka Outlook 2007Outlook 2010Topi-maso mailaka an'ny Outlook 2010Fitsapana ny mailaka Outlook 2010Outlook 2011Topi-maso mailaka an'ny Outlook 2011Fitsapana ny mailaka Outlook 2011Outlook 2013Topi-maso mailaka an'ny Outlook 2013Fitsapana ny mailaka Outlook 2013Outlook.com (Firefox)Topi-maso mailaka an'ny Outlook.com (Firefox)Fitsapana mialoha ny mailaka an'ny Outlook.com (Firefox)Outlook.com ChromeTopi-maso mailaka an'ny Outlook.com ChromeFitsapana ny mailaka amin'ny Outlook.com ChromeOutlook.com Internet ExplorerTopi-maso mailaka an'ny Outlook.com Internet ExplorerFitsapana mialoha ny mailaka an'ny Outlook.com Internet ExplorerLahatsoratra tsotraTopi-maso mailaka amin'ny Plain TextFitsapana mialoha ny mailaka Plain Textmpampahalala lazalalana miverinamiverina lalan-kafafiverenan'ny lalana miverinafandrika spamtambajotra fandrika spamspam triggersThunderbird farany WEB-BASEDThunderbird fijerena mailaka farany amin'ny WEB-BASEDThunderbird fanandramana mailaka voalohany amin'ny alàlan'ny WEB-BASEDWindows Phone 8Topi-maso mailaka Windows Phone 8Fitsapana mialoha ny mailaka Windows Phone 8Yahoo! Mail ChromeYahoo! Alefaso mailaka ny mailaka ChromeYahoo! Fitsapana ny mailaka Chrome mailakaYahoo! Mail FirefoxYahoo! Hijery mailaka ny mailaka FirefoxYahoo! Fitsapana ny mailaka mailaka Firefox FirefoxYahoo! Mail Internet ExplorerYahoo! Hijery mailaka ny mailaka Internet ExplorerYahoo! Fitsapana ny mailaka amin'ny mailaka Internet Explorer
Fitaovana ara-barotra mailaka vaovao tsara, heveriko fa ho gaga ny olona amin'ny mailaka raha vantany vao azony ny angon-drakitra tsara kokoa.
Mpahay siansa momba ny angona matotra
16 Aogositra 2016 amin'ny 10:47 PM
Izay vao namono ny maha-ara-dalàna an'ity lahatsoratra ity “250ok no mpanohana ny tranonkalantsika ary sakaizan'ny mpanorina Greg Kraios aho”
Eny, namako niaraka tamin'i Greg aho izay nahita io fahitana io efa ho folo taona lasa izay ary ankehitriny dia mifaninana amina orinasa goavambe iray manana loharanon-karena am-polony taonina. Faly aho fa nanampy tamin'ny fampielezana ny vahaolana momba azy. Ary misaotra betsaka ihany koa aho ho an'ireo mpanohana anay izay manohana an'ity tranonkala ity ary manampy ahy hanome vaovao bebe kokoa amin'ny mpamaky anay. Mangarahara ny famoahana ary tokony hoderaina, fa tsy hataon'ny mpaneho hevitra tsy fantatra anarana matahotra loatra hanome ny tena anarana na adiresy mailaka tena izy.
Misy mpanjifa Cert hafa eto ve mahita ny fanakanana ireo mpiara-miasa amin'ny Return Path? Ary misaotra tamin'ny mangarahara, Douglas! Aza adino, tsy misy asa soa tsy voasazy. 😉
Douglas, misaotra anao noho ilay lahatsoratra; Manaiky aho fa zava-dehibe ny fahalalana momba ny safidinao rehefa misafidy ny mpiara-miasa aminao. Manahy aho fa tsy afaka nanolotra toerana tsy mitongilana ianao amin'ny fampitahanao satria manana fifandraisana matihanina sy manokana amin'ny 250ok ianao, araka ny nomarihinao tamin'ny fanambarana nataonao. Nanamarika fanontaniana maromaro ihany koa aho tao anatin'ny fandinihanao ny lalana Return, ary diso fanantenana aho fa tsy nanantona anay hanampy anao hameno ireo banga ireo. Amin'ny maha mpitantana varotra vokatra anao ho an'ny vahaolana amin'ny Optimization amin'ny mailaka, dia tokony ho - ary mbola faly aho - hanampy anao hamaly ireo fanontaniana ireo.
Mba hamaliana ny iray amin'ireo fanontanianao - eny, ireo mpikambana ao amin'ny tontolon'ny Consumer Network dia nanome fanekena ny Path Path hiverina amin'ny fidirana amin'ny data sy ny angon-drakitra. Faly aho manome vaovao bebe kokoa momba an'io raha tianao.
Ao amin'ny Path Path, reharehantsika tanteraka ny angona tsy manam-paharoa ananantsika izay manome hery ny vahaolana ary ny fomba fijery omen'ity angon-drakitra ity ho an'ny mpanjifantsika. Fantatray fa ny fomba fijerin'ny angon-drakitra dia ilaina amin'ny fahombiazan'ny fandaharan'asa marketing amin'ny mailaka, ary zava-dehibe ny fanapahan-kevitry ny mpivarotra mifototra amin'ny angona avy amin'ny tena mpamandrika. Matoky izahay fa ny mpivarotra mailaka izay tena maniry hampitombo ny programa mailaka ary mahita ROI nohatsaraina avy amin'ny mailaka dia hahazo tombony amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Return Path. Araka ny efa noresahinao, manana ny angona izahay, ny fifandraisan'ny indostria ary ny fahalalàn'ny mailaka manam-pahaizana izay afaka manampy ny mpivarotra hampitombo ny vola azony avy amin'ny mailaka amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny mailaka azon'izy ireo, ny fananganana fifandraisan'ny mpanjifa tsara kokoa, ary ny fanatsarana ny mailaka ho fanatsarana ny fifamatorana.
Misaotra fa nanokana fotoana hanatonana. Tsy isalasalana fa ny sakany, ny tratra ary ny lalana nalehan'ny Return Path dia nirehitra tamin'ny indostrian'ny fanaterana. Misaotra anao nanazava ny olan'ny fidirana data koa.
Tsara be foana ny fifaninanana, ary rehefa nampiasainay ny fitaovana 250ok ho an'ny ESP manokana, dia gaga be izahay tamin'ny valiny. Ka na dia namako aza aho ary mpanohana izy ireo, dia mpanjifa sy mpampiasa ny sehatra ataon'izy ireo koa izahay. Tsy dia mitongilana tanteraka ny fanehoan-kevitra amin'ny sehatra - Tsy hanao tolo-kevitra mihitsy aho ho an'ny sehatra iray izay tsy nampiasaiko voalohany.
Dec 5, 2016 ao amin'ny 12: PM PM
Amin'ny maha-manam-pahaizana momba ny delivrability ahy any Frantsa, dia gaga aho fa soso-kevitrao ny RP hanatsara ny fahombiazan'ny Orange. Orange tsy mampiasa Certification RP.
Eny izy ireo: https://blog.returnpath.com/orange-partners-with-return-path-to-maximise-its-subscribers-email-experience/
Dec 18, 2017 ao amin'ny 2: PM PM
Liana aho amin'ny fampitahana ny vidiny koa. Mampiasa 250ok aho amin'izao fotoana izao, saingy miahotra ny handeha amin'ny doka tsy mila fantatro farafaharatsiny ny fampitahana eo anelanelan'ny 250ok sy ny lalana miverina